တရုတ်အသေးစားအပြည့်အဝဆိပ်ကမ်း3Way ကိုအနားကွပ် Ball ကို Valve Square ကိုခန္ဓာကိုယ်ပွုပွငျ 'Pad စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ | JKG Valve
ANSI / JIS ဘီ / Din / GB ကို / BS Ball ကိုအဆို့ရှင်
ANSI / JIS ဘီ / Din / GB ကို / BS ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
ANSI / JIS ဘီ / Din / GB ကို / BS လွှဲစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်
lift type ကိုစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်
ANSI / JIS ဘီ / Din / GB ကို / BS မြင့်တက်တံခါးဝအဆို့ရှင်
အာရုံစူးစိုက်မှု Butterfly က Valve
သုံးဆအော့ဖ်ဆက် Butterfly က Valve
ANSI / JIS ဘီ / Din / GB ကို / BS လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
က S-type ကိုကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
လက် plug ကိုအဆို့ရှင်
Y က-filter ကို
လက်ကိုင် type ကိုခြေလျင်အဆို့ရှင် Pull
3 ပိုငျးပိုငျးသံမဏိ Pneumatic Actuated Ball ကို Val ...
GB ကို / ANSI CF3 လူပျိုတံခါးခတ်န့်ကို Valve မဟုတ်သော Check ...
နွေန့်ကို dual ပြား Swing Valve Butt Check ...
သာမန်ဖိအားအနားကွပ် Ball ကို Valve လီဗာ 150L ကိုငျတှယျ ...
JIS ဘီ 10K SCS14 အပြည့်အဝဆိပ်ကမ်းသံမဏိ Ball ကို Valve: D ...
mount Pad တွေနဲ့အသေးစားအပြည့်အဝဆိပ်ကမ်း3Way ကိုအနားကွပ် Ball ကို Valve Square ကိုခန္ဓာကိုယ်
ရေပေါ် Ball ကို Valve Casting
- ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု: GB12237-89
- ကော်နက်ရှင်: JB / T79
- Fireproof စမ်းသပ်ခြင်း: API607 4th 1993
- စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးရေး: GB ကို / T13927-1992
Size ကို Range:
- -20 ° C မှ ~ 185 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သုံးလမ်းဘောလုံးကိုအဆို့ရှင် can be divided into Q44L type and Q45T type for different switching requirements of medium flow direction."L-PORT" MODEL can realize the switching of the medium flow direction, and the two channels which can be perpendicular to each other can be connected or closed. "T-PORT" MODEL can realize the splitting or mixed flow of the medium, not only can realize the switching of the medium flow direction, but also can connect the three channels to each other, and can also close any channel and connect the other two channels. The valve has the characteristics of compact structure, beautiful appearance and good sealing performance.
ဖိအား အရွယ် L ကို L1 နှင့် : D D1 D2 Z-φd ISO5211
အဆိုပါအဆို့ရှင်လုံခြုံစစ်ဆင်ရေးအာမခံ, ရေနှင့်အဖျက်ရေတူ၏ဖျက်သိမ်းရေးကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အသုံးပြုသည်စုပ်စက်၏ဖိအားကိုရေထွက်ပေါက်၏အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းအတွင်းသုံးရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်းမြို့ပြ, ထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများနှင့်ဟိုတယ်များဖြစ်ပါသည် ပိုက်ကွန်ယက်၏။ ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အဝအကောင့်ယူဖို့ဒီဇိုင်းမျှတုန်ခါမှုမရှိဆူညံသံချောမွေ့စစ်ဆင်ရေး, ဟိုတယ်များ, လူနေအိမ်တိတ်ဆိတ်ပြီး power-saving လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိကြောင်းအာမခံပါသည်။
3 လမ်း Ball ကို Valve ၏အစွမ်းသတ္တိ
1. အရည်ခုခံနိမ့်သည်ကို၎င်း, ခုခံကိန်းပိုက် lengthh ညီမျှသည်။
2. အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာအလေးချိန်အရွယ်အစားနှင့်အလငျး၌, ရိုးရှင်းသောသေးငယ်သည်။
3. ဒါဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြီး, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစကျယ်ပြန့်လေဟာနယ်စနစ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
4. စစ်ဆင်ရေးဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲလျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်, အဆင်ပြေဖြစ်ပြီး, လည်ပတ်ခရီးဝေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်သည့်အပြည့်အဝပိတ်ပွဲ, အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ခြင်းမှ 90 °ဖြစ်ပါတယ်။
5. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်ရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီး, နှင့်တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်ယေဘုယျအားဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပြီး, disassembly နှင့်အစားထိုးအတော်လေးအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။
6. အပြည့်အဝပွင့်လင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝပိတ်ထားသောအခါ, ဘောလုံးကို၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံလတ်ကနေခွဲထုတ်သည်နှင့်အလတ်စားယင်းအဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်၏တိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
မြင့်မားသောလေဟာနယ်ထဲကနေအမြင့်ဆုံးဖိအားကိုမှတက်အနည်းငယ်မီတာမှသေးငယ်တဲ့အနေဖြင့်အနည်းငယ်မီလီမီတာမှ applications များ၏ 7. Wide အကွာအဝေး, လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ယခင်: PN16 သံမဏိအနားကွပ် Ball ကို Valve DN50 SS304 SS316 WCB ကိုငျတှယျ
နောက်တစ်ခု: Rotary Actuated စက်မှု Pneumatic Valve 1000WOG သံမဏိ Ball ကို Valve
3pc Ball ကို Valve
ANSI Ball ကို Valve
Ball ကို Valve din
Mini ကို Ball ကို Valve
Pn16 Ball ကို Valve
Ss304 Ball ကို Valve
Wcb Ball ကို Valve
DN150 WCB သံမဏိအနားကွပ် Ball ကို Valve: D ...
JIS ဘီ 10K SCS14 အပြည့်အဝဆိပ်ကမ်းသံမဏိ Ball ကို Va ...
မြင့်မားသောဖိအားကို2Piece Ball ကို Valve လက်စွဲစာအုပ် JIS ဘီ 20K ...
WCB 150LB ကာဗွန်သံမဏိ4လက်မသံမဏိ B က ...
Q71F န့်ကို3လက်မသံမဏိ Ball ကို Valve Ca ...
Handwheel ထိန်းချုပ်ရေး Valve Actuator လက်စွဲစာအုပ်ပဓာန ...
JKG Valve နည်းပညာ Co. , Ltd ကျနော်တို့အသီးအနှံအဆို့ရှင်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ 2004 ခုနှစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
26 အဆောက်အဦ, No.696 Binhai ပဉ္စမလမ်း, Longwan districe, Wenzhou, Zhejiang, တရုတ်